बोल्न नजान्दा विवादको पहाडमा पुगिन सुन्दरी नीति शाह « News24 : Premium News Channel
बोल्न नजान्दा विवादको पहाडमा पुगिन सुन्दरी नीति शाह
Posted By News24Nepal.TV || Date: 16 November, 2017
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपयुक्त अभिव्यक्ति दिन नसक्दा नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमा आँच आउने गरेको छ । पछिल्लो समय यस्तै भयो नीति शाहको हकमा पनि । मिस नेपाल २०१७ को प्रतियोगिताको सेकेण्ड रनरअप नीति शाहले आफ्नो बोलीमा बिचार पुर्याउन नजान्दा विवादमा तानिएकी हुन् ।
जापानमा भएको मिस इन्टरनेशनलको एक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने क्रममा नीतिले महिला शिक्षाको सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा नेपालका ग्रामीण महिलाहरुको बारेमा दिएको नकारात्मक अभिव्यक्तिका कारण उनी अहिले चौतर्फी आलोचनाको शिकार हुनुपरेको छ । नीतिले आफनो अभिव्यक्तिमा नेपालमा दुई समूहका महिला छन् भनेर बिभाजन गरेकी थिइन् ।
नीतिको अभिव्यक्ति जस्ताको त्यस्तै ।
सुन्दरी नीतिले नेपालमा ग्रामीण र शहरीया महिला भन्दै बिभाजन गरेको असुन्दर विचारले उनी आलोचनाको पहाडमा उक्लिएकी छिन् यतिखेर । सहरमा बस्ने महिलाहरू शिक्षित रहेको, सफा रहेको र ग्रामीण महिलाहरू अशिक्षित र सरसफाइमा ध्यान नदिने उनको दृष्टिकोण थियो । त्यतिमात्र नभएर नीतिले ग्रामीण महिलाहरु विभिन्न देशमा बेचिएकाले यौनकर्मीको पेशा अङगाल्न बाध्य भएको अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।
उनको यस्तो अभिव्यक्तिले समग्र ग्रामीण नेपाली महिलाहरुको अस्तीत्वमा आघात पुगेको छ । उनको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरैले आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । उनले यसो भन्नुको कारण, उनको कमजोर अग्रेंजीले गर्दा हो भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमाहरुमा टिकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
यससंगै कतिले त कमजोर तयारीको साथै सामान्य ज्ञानको कमीले यस्तो बोलेको भनेर लेखेका पनि छन् । हुनत नीतिले यस्तो अभिव्यक्ति किन र कुन आधारमा दिईन् त्यो उनैलाई थाहा होला । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएकी उनले यो विषयमा पूर्व तयारीको अभ्यासको कमी भएको प्रष्ट देखिन्छ । जसले नेपाल र नेपालीको गरिमामा ठेस पुग्न गएको छ । शौन्दर्य र बौद्धिकतालाई आधार मानेर गरिने सुन्दरी प्रतियोगितामा उपयुक्त व्यक्ति र पात्र छनौट हुन नसक्दाको परिणमस्वरुप निति शाह अहिले आलोचनाको पात्र बन्न पुगेकी छिन् ।
२० वर्षीया मोडल मानुसीको हत्या, सुटकेसमा खाँदेर झाडीमा फालिएको अवस्थामा भेटियो शब !
कपालको विषयमा बोलिन नम्रता , चलचित्र प्रसादको गीत ‘बनकी चरी’सार्वजनिक ( भिडियो)
एरिक भेल्लीको निर्देशनमा तयार वृत्तचित्र ‘वियोण्ड द क्लाउड’ नेपालमा प्रिमियर ( भिडियो)
जनक ले ल्याए फेरी भिन्नै स्वादको ‘गीत ठेगाना भेटीयो’
अशोभनीय अभिव्यक्ति नदिन पूर्वराजालाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी 253300
२० वर्षीया मोडल मानुसीको हत्या, सुटकेसमा खाँदेर झाडीमा फालिएको अवस्थामा भेटियो शब ! 250820